Hay'adda Initiative ee Little Falls waxay u adeegtaa noocyo kala duwan oo ku yaalla bartamaha Minnesota. Waxay diiradda saareysaa dhaqaalaha, beesha iyo deeqaha leh 14-gobol ee gobolka iyada oo xoogga la saarayo horumarinta dhaqaalaha, iskaashiga jaaliyadaha, dadaallada ilmanimada hore iyo ilaalinta iyo dabaaldegga hantida Central iyo hantida dabiiciga ah.
10ka sano ee soo socota, dadka deggan Central Minnesota ee dadka da'doodu tahay 65 iyo ka weyn ayaa la filayaa inay koraan 49.5 boqolkiiba halka dadka qaangaarka ah ee qaangaarka ah ay kor u qaadi doonaan boqolkiiba 2. Tani waxay isbeddel ku sameyneysaa dadweynaha iyo ganacsiga iyo hoggaaminta beelaha iyaga oo abuuraya, oo ay weheliyaan dad badan oo Maraykan ah iyo dad aad u fara badan oo kala duwan, ayaa horseeday inay aasaasaan hay'ad isugeyn ah - Barnaamijka Hoggaanka Hore iyada oo loo marayo Waddooyinka loo maro taxanaha isdhexgalka bulshada Barnaamijka Fududeynta Tababarayaasha - In la xoojiyo hoggaamiyayaasha jiilka soo socda ee gobolka oo dhan.
Hudda Ibrahim waa mid ka mid ah qiyaastii 10,000 oo muhaajiriin ah iyo qoxooti kuwaas oo hada gurigooda ka dhigaya aagga St. Cloud. Ka qaybgalayaasha barnaamijyada "Initiative Foundation", Ibraahim waa mid ka mid ah afar hoggaamiye oo soo baxay oo loo xushay inuu ka qaybqaato barnaamijka Shahaadad-qaadista ee laba sano ah. Barnaamijku wuxuu bixiyaa tababbar, hagid iyo deeq sanadle ah oo loogu talagalay Fellowska oo loogu talagalay inuu saameyn ku yeesho dhaqaalaha, bulshada iyo bulshada saamayn ku leh Gobolka Minnesota. Iyada oo ganacsigeeda bilawga ah, Ibraahim, qoraaga iyo barwaaqada iyo barwaaqada caddaaladda bulshada ee St. Cloud Community & College Technical, waxay ka shaqeyneysaa sidii ay ula macaamili lahaayeen macaamiisha dhammaan dhaqamada kala duwan intay isku xirayaan ganacsi leh xal loo diyaariyo oo awood u leh shaqaalaha.
"Anigu waxaan arkayaa anoo ah dhisme bridge ah," ayuu yidhi Ibraahim. "Haddii aan rabno inaan korinno, haddii aan rabno inaan si wadajir ah ugu noolaano, waxaan u baahanahay inaan isku halayno midba midka kale. Waxaan dareemayaa in ay tahay meesha aan jeclaan lahaa inaan diirada saaro: Inaan dhisno bulshadan, iyaga oo isu keenaya si ay u dhisaan xiriir iyo kalsooni. "
Tan iyo markii la aasaasay, Hay'adda Initiative Foundation wuxuu tababaray kumanaan hoggaamiye bulsho sida Ibraahim oo ka tirsan barnaamijyada iyo deeqaha ay bixiyaan. Hay'adda waxay sidoo kale siisaa deeqo iyo deeqo waxbarasho waxayna bixisaa maaliyad ganacsi oo keeneysa abuurista iyo sii wadista shaqooyin tayo leh oo degaanka.
"Iyadoo maalgelinta iyo taageerada Machadka" McKnight Foundation, Hay'adda Initiative waxay xoojisay dhaqaalaha iyo beelaha Minnesota, "ayuu yidhi Matt Varilek, Madaxa Hay'adda Initiative Foundation. "Shirkadeena iskaashiga ah, waxaanu hormarineynaa ujeedooyinka ururka McKnight iyada oo sidoo kale ku hawlan hawlaha iyo ujeedooyinka si gaar ah u aqoonsaday dadweynaha Minnesota."